Cutubyo Ka Tirsan Ciidamada Ethiopia iyo kuwa Dowladda KMG Oo Talaadadii Baaritaano Xoogan Ka Bilaabay Muqdisho.
Wadaado Tabliiq ah Oo Ku Guda Jiray Faafinta Diinta Islaamka Oo La Qab-qabtay
Aadan Xaashi Cayroow Oo Sheegay Inay Ka Dambeeyeen Qaraxii Raysul Wasaare Geedi.
Cumar Xaashi Oo Eedeyn Kulul Dusha Uga Tuuray Masuuliyiinta Gobolka Banaadir.
Saaka waaberigii ayaa cutubyo ka tirsan ciidamada Ethiopia ee ku sugan caasimada muqdisho lagu arkayey iyagoo baaritaano xoogan oo dhinacyo badan leh ka wada xaafado iyo degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho .
Degmada huri-waa ee magalada muqdisho ayaa saaka waxaa ka dhacay baaritaan xoogan oo lagu gelayo guryaha dadka rayidka ah si xoog ah oo aan loo kala aabe yeelayn islamrkaana lagu soo qab-qabtay dad rayid ah oo lagu aaneeyey inay ka dambeeyeen qaraxyada iyo dilalka lala beegsado askarta iyo masuuliyiinta dowlada KMG ah.
Sidoo kale dadka shacabka ah ayaa si xowli ah uga soo cararaya xaafadahaas islamrkaana naftooda uga cabsi qaba in dhibaato ay ugu gaystaan ciidamada xukuumada Ethiopia islamrkaana baaritaano ka wada wadooyinka ,xaafadaha iyo weliba meel kasta oo kamida degmadaasi
Wadada dheer ee warshadaha gaar ahaan inta u dhaxaysa xaafadda Caymiska ilaa deegaanka Suuqa xoolaha ayaa waxaa si aad ah u gaafwareegaya Ciidamao Ethiopian-ah iyo kuwa Dowladda KMG oo is kaashanaya, iyadoona aanu jirin wax gaadiid ah oo wadadaasi isticmaalaya saaka.
Dhinaca kale inta u dhaxaysa garoonka Diyaaradaha ee Muqdisho ilaa Isgoyska km-4 ayaa lagu arkayaa ciidamo boqolaal gaaraya oo Ethiopian-ah kuwaasi oo baaritaano xooggan ka sameynaya goobahaasi.
Hawlgaladani baaritaanka ah ee caasimadda ay ka wadaan ciidamada Ethiopianka ah iyo weliba kuwa dowlada KMG ah ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xili uu wasiir ku xigeenka wasaarada Gaashaandhiga ee Dowladda KMG Salaad Cali jeelle uu sheegay in Ciidamadii Militariga laga saaray magaalada, islamarkaana ay Ciidamada Booliska iyo kuwa Ethiopia ay baaritaano ka sameyn doonaan guud ahaan Caasimada.
Si kastaba ha ahaatee Magaalada Muqdisho ayaa xaaladeeda amaan ay faraha kasii baxaysaa maalinba maalinta ka dambeysa, xilli uu fooda inagu soohayo shirka la iclaamiyey ee dib-u heshiisiinta oo ku beegan bartmaha bishan aynu ku jirno ee june.
Howl gal balaaran oo ay sameeyeen ciidamada dowlada KMG ah iyo kuwa Ethiopia saaka waaberigii ayaa lagu qab-qabtay tiro culimo-udiinka tabliiqa ah oo xiligaas kasoo noqday faafinta diinta islaamka islamrkaana kusoo jeeday masaajidka caanka ku ah culimo udiinka tabliiqa ee loo yaqaano al-hidaaya .
Culimo udiinkan tabliiqa ah ayaa watey gawaarida nooca loo yaqaano minu buska oo ka koobnaa 9-baabuur islamrkaana ay isku gadaameen ciidamada huwanta ah ee dowlada iyo ethiopia iyagoo amar ku siiyey inay joojiyaan howl-galka faafinta diinta ee ay wadaan kadibna loo dhaadhiciyey xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho iyagoo lagu qaaday baabuurta ku caanka ku ah ciidamada xukuumada ethiopia ee Uuraalada ah .
Sida uu saxaafada u xaqiijyey qof goob jooge ka ahaa xiligii uu falkaasi dhacayey islamrakaana diidey in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in culimo-udiinkan tabliiqa ah looga shakiyey inay ka dambeeyaan falalka is qarxinta ah ee sida ba,an uga socda magaalada caasimada ah ee muqdisho ee lala beegsanayo xarumaha dowlada KMG ah iyo weliba saldhigyada ciidamada xukuumada Ethiopianka .
Wadaadada tabliiqa ayaa lagu yaqaanaa faafinta diinta islaamka iyo u adeegista bulshada muslinka ah sidaana waxaa yiri Axmed Nuur oo kamid ah dadka deegaankaas ku sugnaa markii la qab-qabnayey culimadan islamrkaana loo dhaahdicinayey xabsiga weyn ee muqdisho isagoo saxaafada u waramayey .
Maaha markii ugu horaysay ee sidan oo kale loo soo qab-qabto culimo-udiinka tabliiqa loo yaqaano iyadoo bishii janaayo ee sanadkan la qab-qabtay culimo-udiin ka koobnaa 9-nin xili ay ku guda jireen faafinta diinta islaamka iyadoo laga soo qab-qabtay masaajid ku yaala degmada xamar weyne islamrkaana baaritaano kadib laga sii daayey xabsiga madaxtooyada ee villa, soomaaliya mudo 15-cisho kadib.
Cajalad video ah oo la soo dhigay bar internetka oo ay leeyihiin Garabka al-shabaab ee kamid ahaa golaha maxaakiimta islaamka soomaaliyeed ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen qaraxii xooganaa ee ka dhacay hoyga raysal wasaaraha dowlada KMG ah cali maxamed geedi.
Garabka al-shabaab ee uu hogaamiyo aadan xaashi cayroow ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkii is-miidaaminta ee lagu bar-tilmaameedsaday Guriga Ra�isul-wasaaraha DFKMGS, Prof. Cali Maxamed Geeddi oo ku yaala degmada cabdi-casiis ee gobolka banaadir kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac tiro badan.
Sidoo kale Goor qoraxdu sii dhacayso ayay ahayd xiligii doraad lagu weeraray Guriga Geedi gaari nooca loo yaqaano Qooqan ee shirkada TOYOTA ay farsamayso uu qof naftii hure ah oo ku lebisnaa dharka cagaaran ee ciidanka milatariga ee dowlada KMG ah isku soo miidaamiyey gurigaasi, islamrkaana gaariga uu watey qofkaasi uu gebi ahaanba ahaa mid laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Qaraxyada ismiidaaminta ah ayaa dhowaanahanba kusoo badanaya magaalada muqdisho iyadoo uu noqonayo qaraxii af-raad ee la doonayey in lagu khaarajiyo Raysal -wasaare Geedi balse uu ka badbaaday, islamrkaana uu sheegay inay ka dambeeyaan kooxo uu ku sheegay inay yihiin kuwo xiriir la leh shabakada al-qaacida waa siduu hadalka u dhigaye .
Afhayeenka xubnaha la baxay baarlamaanka xorta ah cumar xaashi aadan oo shir jaraa,id ku qabtay xarunta caasimada u ah dalkasi Ereteriya ee Asmara ayaa daboolka ka qaaday in hadii la wax yeeleeyo odyaasha dhaqanka ee hawiye arintu isu bedelayso mid kasii darta .
Cumar xaashi ayaa eedayn kulul dusha uga tuuray gudoomiyaha gobolka banaadir maxamed dheere hadalkii kasoo yeeray ee ahaa inay ka dambeeyaan qaraxyada iyo dilalka ka socda caasimada muqdisho odayaasha dhaqanka ee hawiye .
Cumar xaashi oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku adkeeyey inay odayaasha beesha hawiye ay yihiin odayaal dhaqameed islamrkaana dhaqanka looga dambeeyo siyaasadna aysan ku shaqo lahayn ,hubna aysan wadan ,mana haboona in la handado ,islamrkaana loogu caga jugleeyo in xabsiga loo dhaadhicinayo.
Sidoo kale cumar xaashi ayaa hadalkiisa sii raaciyey inaysan sidan ahaan doonin oo arintu kasii darayso hadii laysku taa taabto odayaasha dhaqanka ee beesha hawiye.
Hadalkan cumar xaashi kasoo yeeray ayaa kusoo beegmaya xili uu cabdi xaaji iimaan oo ah gudoomiyaha guurtida dhaqanka hawiye uu sheegay in xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ay noqotay xabsiga guantanama-bey,islamrkaana si kulul u cambaareeyey masuuliyiinta gobolka banaadir ,taasoo ka dambaysay eedaynta maxamed dheere ee odayaasha dhaqanka hawiye markii uu sheegay inay ka dambeeyaan qaraxyada iyo dilalka lala beegsado masuuliyiinta dowlada KMG ah .